भडकाऊ प्रकृति को सबै भन्दा साधारण रोगहरु को एक cystitis छलफल। महिला मा उपचार दबाइ देखि लिएर र लोकप्रिय व्यञ्जनहरु संग समाप्त, विभिन्न विधिहरू द्वारा गर्न सकिन्छ। महिला किन यो रोग overcomes? वास्तवमा, बिरामी र मानिस बस मानवता को सुन्दर आधा को सुनिंनु को अवस्थामा धेरै साधारण हो गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलै प्रजनन प्रणाली को anatomical संरचना द्वारा बताए छ।
Cystitis: को उपचार महिलाहरु
सामान्यतया, रोग असहज जीवन सिर्जना गर्न लक्षण दायरा सँगसँगै छ। तल्लो पेट दुखाइ aching द्वारा सास्ती एक मानिस, शरीर तापमान rises, त्यहाँ घृणा र retching छन्। Urination बारम्बार र निकै कष्टकर। निस्सन्देह, एक परिचित ताल बस्न जारी सम्भव छैन, त्यसैले हामी यो अवस्थामा बिजुली प्रभाव प्रभावकारी माध्यम फेला पार्न छ। पहिलो एक योग्य व्यावसायिक मदत खोज्न छ। उहाँले मात्र कारण पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ र अनुसार यस जीव को व्यक्तिगत विशेषताहरु संग एक उच्च गुणस्तरीय उपचार नियुक्त गर्न। रोग को बेवास्ता दीर्घकालीन मात्र राम्ररी जा worsen छैन, तर पनि अन्तस्करणले कब्जा, को ureter अप संक्रमण एक खतरा सिर्जना गर्नुहोस्। पक्कै, तोकिएको दबाइ उपचार महिलाहरु मा cystitis को। औषध फरक अभिमुखीकरण निर्धारित हुन सक्छ, तर यो पेय मा एन्टिबायोटिक को एक पाठ्यक्रम खर्च गर्न अनिवार्य छ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले द्वारा अनुसन्धान अनुसार, सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम "Monural" लागूपदार्थ फेला परेन। संग पहिलो आवेदन symptomatic manifestations stoped, र एक हप्ता संक्रमण गायब।
Cystitis: महिला मा उपचार शक्ति समायोजन समावेश
चाँडै रोग सामना गर्न शरीर सहयोग गर्न, तपाईं आफ्नो आहार पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। उपचार अवधि तीव्र र नूनिलो खाद्य पदार्थ प्रयोग नत्याग्ने राम्रो छ। तपाईं पनि कफी र मादक पेय को मात्रा कम गर्नुपर्छ। जानिन्छ, यो तरल पदार्थ सुविधा toxins हटाउन, दैनिक त्यसैले कार्रोप्नेटेड पानी कम्तिमा दुई लिटर पिउन गर्नुपर्छ। शरीर मा लाभकारी प्रभाव छ ताजा रस, गाजर र स्याउ - विशेष गरी। Frechet प्रति दिन 300 एमएल Suffice एकदम दुखाइ कम गर्न। मीठो केक र पेस्ट्री ताजा फल वा जामुन प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
Cystitis: महिला गैर-परम्परागत विधिहरू को उपचार
परम्परागत चिकित्सा को Adherents एक रोग जडीबुटी र concoctions को मद्दतले निर्मूल गर्न सकिन्छ कि तर्क। साँच्चै परिणाम दिन केही तरिका तथापि, मात्र एउटा adjunctive चिकित्सा रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरै विशेषज्ञहरु (न्यानो हुन सक्छ) को समाप्त गर्न न्यानो संकुचन सिफारिस महिलाहरु मा cystitis। उपचार लोक उपचार यस्तो साग वा thorns रूपमा जडीबुटी विभिन्न decoctions, तयारी पनि समावेश छ। सानो परिमाणमा पनि प्रभावकारी रस वा सलगम कालो मुला। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सुनिंनु पटक देखा परेको छ भने, त्यसपछि हामी एक कमजोरीको वशमा पऱ्यौं आशा गर्न सक्छौं, त्यसैले यसलाई रोकथाम पूरा गर्न आवश्यक छ। पहिले, तपाईं एक चिसो मा बस्न सक्दैन, यो हावाको स्थिति मा पोशाक गर्न सजिलो छ। दोश्रो, यौन सक्रिय।
Ingrown खुट्टाको नड़ को प्रभावकारी उपचार
Gerontology - यो के हो? Gerontology को अनुसन्धान संस्थान। gerontology को सफलताको
एक छलांग वर्षमा के के गर्न: लक्षण र अन्धविश्वासको
अदरकसँग चिया कसरी पिउने? खाना पकाउने सुविधाहरू, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु र समीक्षाहरू
सूर्य मारा के गर्न: पहिलो सहायता
कसरी लेटेक्स छत संग रंग गर्न: प्रक्रिया को सुविधाहरू
पत्थर बिच्छी। जादू पत्थर र ज्योतिष
लोक चिकित्सा मा एलर्जी देखि तेजपात
दाग लागेको सिसा को प्रविधी विनिर्माण - ढोका र मात्र